Tag: njikarịcha oyiyi | Martech Zone
Tag: oyiyi njikarịcha
Tupu anyị gwuo ụfọdụ ndụmọdụ maka ị nweta akụ dijitalụ, hapụ ịnwale ọchụchọ Google nke anyị. Ahapụ ka nyocha onyonyo na otu n'ime asọmpi kachasị asọmpi na ịntanetị - puppy puppy. Kedu otu Google nwere ike isi bulie ibe ya? Kedu otu algorithm si mara ihe mara mma? Nke a bụ ihe Peter Linsley, onye njikwa ngwaahịa na Google, kwuru banyere nchọta onyonyo Google: Ozi anyị na Google Image